Umshini wokuprinta wokugqoka we-T3 Shirt we-A3 China Manufacturer
Incazelo:I-T Shirt Yokushicilela Umshini Wokuthengisa,I-T Shirt Yokushicilela Umshini Wephrinta,Umshini wokunyathelisa we-T-Shirt ozenzakalelayo
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-Digital > I-T Shirt Printer > Umshini wokuprinta wokugqoka we-T3 Shirt we-A3
Ingabe ufuna ukwenza indwangu yakho ye-DIY, ihembe, isisindo nezicathulo? Lo Mshini Wokushicilela we-T-Shirt uzothola isicelo sakho. Kudinga ambalwa kodwa emuva kakhulu. Vele uthenge izindleko zekhati elilodwa nge-USD5.00 ngaphandle kwama-logos noma izithombe, bese usebenzisa iphrinta yethu ukuphrinta, izindleko nge-USD0.08. Ungathengisa ngo- USD15.00 okungenani. Ungabona ukuthi ibhizinisi elihle kakhulu. It sebenzisa ukusebenza okulula, okuzinzile. Kungakhathaliseki ukuthi iphethini elula, imibala egcwele imibala noma ukuxuba amaphethini, ukuphrinta kuphela isikhathi esisodwa, akudingeki ukuba wenze ifilimu ngezinqubo ezimbalwa. I-T Shirt Printing Machine Yokudayiswa , zizwe ukhululekile ukuxhumana nami. Ingasetshenziswa kwi-T-shirt, ibhulukwe izicathulo, izingubo zokugqoka, isigqoko, isilikhi, isikhwama sokuthenga, ama-hoodies njalonjalo.
I-T Shirt Yokushicilela Umshini Wokuthengisa I-T Shirt Yokushicilela Umshini Wephrinta Umshini wokunyathelisa we-T-Shirt ozenzakalelayo I-T Shirt Yokushicilela Umshini A4 I-T Shirt Yokushicilela Umshini OEM I-A3 T Shirt Yokushicilela Umshini I-T Shirt Yokushicilela Umshini we-T-Shirt I-T Shirt Yokushicilela Ibhizinisi